Maxkamadda Sare ee Maraykanka oo go’aan ka soosaartay dacwada Gen. Maxamed Cali Samatar | Xarshinonline News
Maxkamadda Sare ee Maraykanka oo go’aan ka soosaartay dacwada Gen. Maxamed Cali Samatar
Posted by xol2 on June 3, 2010 · Leave a Comment
Washington, (NNN)- Maxkamad ku taala dalka Maraykanka oo qaadaysay dacwad ka dhan ah Jen. Maxamed Cal Samatar, ayaa shaaca ka qaaday inaanu heli karin ogolaanshaha sharci jidaynaya inaan dacwad lagu oogin, ka dib markii hore loogu soo oogay jidh-dil, xasuuq iyo xadgudubyo ka dhan ah xuquuqal iinsaanka, isla markaana waxay maxkamadda sare ee dalkaasi xukuntay shalay in maxkamad lagu taago dembiyaddaas.
Go’aan loo dhan yahay ayay Maxkamadda Sare ee Maraykanku ugu wargelisay gacan-ku-dhiigle Maxamed Cali Samatar in la jebiyay dalab uu isku difaacayay oo uu kaashanayay Sharciga Daryeelka Ajaanibka Madaxabanaan ee Maraykanka u yaala. Hase yeeshee, siday faafiyeen Wakaladdaha Wararka Ajaanibka ah qaarkood, Xaakim John Paul Stevens, ayaa sheegay in ku-xukunka qaynuunka Maraykanka ee Sharciga Daryeelka Ajaanibka Madaxabanaan uu ilaaliyo hay’addaha shisheeyaha ah iyo dalalka shisheeyaha ah, balse aanu si rasmiya u damaanad-qaadayn sarkaal metelaya waddan, isla markaana aanu siinayn Mr Samatar wax badbaado ah. “Maraykanku ma difaacayo dacwad ka dhan ah saraakaal hore oo Soomaali ah,” ayuu yidhi garsooruhu.
Xaakim ka tirsan Maxkamadda Federaalka Maraykanka, ayaa hore meesha uga saaray kiiska ka dhanka ah Maxamed Cali Samatar, isla markaana sheegay inuu helayo hanaanka sharci ee dareelka diblomaasiyadeed. Hase yeeshee, Maxkamad Racfaanka ah ayaa dib u soo noolaysay kiiskaas oo sheegtay inaanu qaynuunkaasi daryeel u ogolaanayn shaqsiyaadka gaarka ah.
Kiiskan oo la sheegay in si dhaw loola socday saamaynta siyaasadeed ee uu la iman karo, ayaa bixinta damaanad-qaaddis loo ogoladaa ay ka dhigan tahay in jidh-dilayaasha ajaanibka ah ee Maraykanka ku nooli ay ka baxsan karaan masuuliyaddahooda dembiyada ay galaan, sidaana waxa la sheegay inay soo qaddimeen kooxaha u ololeeya ururada xuquqal iinsaanku.
Kooxo Somalilanders ah oo ku sugan dalka Maraykanka ayaa soo qaddimay inay Cali Samatar u haystaan dacwado la xidhiidha jidh-dil iyo xadgudubyo ka dhan ah xuquuqal iinsaanka oo ay galeen askartii iyo masuuliyiin kale oo ka tirsanaa nidaamkii Siyaad Barre oo uu Cali Samatar taliskiisa ciidamada hayay. Mr Samatar waxa uu ku noolaa Virginia tan iyo 1997-kii, waxaana kiiskan markii ugu horaysay lagu soo oogay sannadkii 2004-tii, iyada oo loo cuskanayay sharciga Maraykanka u yaala ee Daryeelka Dhibanayaasha Jidh-dilka.
Filed under Bulshada, usa
← Daruuro ka samaysan ciidda duufaan ka dhacay lamadegaanka Gobi oo dul hoganaya tuulo ka tirsan Shiinaha
Dhoolatuskii Xisbiga Kulmiye iyo Taageerayaashiisa + Khudbadihii Masuuliyiinta Xisbiga + Sawirro →